Maamulka Somaliland oo jawaab ka bixiyay digniin dhinaca amaanka ah oo dowlada Ingiriisku soo saartay | Radio Muqdisho
Maamulka Somaliland oo jawaab ka bixiyay digniin dhinaca amaanka ah oo dowlada Ingiriisku soo saartay
Published on January 28, 2013 by Mowliid · No Comments · 2,924 views
Maamulka Soomaaliland ayaa jawaab ka bixiyay digniino dhinaca Amaanka ah oo dowladda Enigirska ay ku sheegtay in ay suurta gal tahay in weeraro iyo afduubyo lagula dhaqaaqo dadka Ajaanibta ah ee ku sugan deeganada Soomaaliland.
Kadib warsaxaafadeed ka soo baxay wasaaraa arimaha dibadda dowlada Ingariiska oo ay muwaadiniinteeda uga digeyso Qatar dhinaca amniga ah iyo agagixiso oo ka dhici karo deegaanada waqooyi galbeed ee Soomaalia oo ayaa waxaa ka hadlay warkaasi kasoo baxay dowlada Ingariiska wasiirka arimaha dibada maamulka Somaliland Maxamed C/laahi Cumur.
Waxa uuna sheegay in amaanka gobalada waqooyi galbeed la isku haleyn karo wax cabsi ahna maamulka Somaliland uusan ka qaban adkeynta amniga ajaanibta iyo dadka Soomaaliyeed ee kusugan halkaasi.
Wasiirka arimaha dibada maamul gobaleedka Somaliland Maxamed C/laahi Cumar ayaa hadalkaan ka sheegay shir jara’aid oo uu xalay ku qabtay magaalada Hargeysa oo ah caasimada labaad ee Soomaaliya.
Shalay ayeey aheyd markii dowlada Ingariiska soo saartay warsaxafadeed ay uga digeyso muwaadiniinteeda Qatar dhinaca amniga ah oo laga yaabo in ay kooxda Al shabaab ka fuliso deegaanadaasi, iyadoo kooxdu horay ugu hanjabtay in gobaldda waqooyi galbeed ee Soomaaliya ay ka fulin doonaan weeraro aragagaxisnimo.